Uhlaziyo lwe-African Swine Fever: Ukuqala kokuLima okuZisebenzelayo iVietnam kwiNdlela yokuBuyisa Imveliso yehagu yaseVietnam ikwindlela ekhawulezayo yokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ngo-2020, ubhubhani we-African swine fever (ASF) eVietnam wabangela ilahleko yeehagu ezimalunga nama-86,000 okanye i-1.5% yeehagu iihagu ezibulewe ngo-2019. Nangona i-ASF iphuma ...
Iinkqubo zokungenisa umoya kwiinkuku zenyama kunye neenkukhu ezizalelayo
Iinkqubo zokungenisa umoya kwiinkuku zenyama kunye neenkukhu ezizalelayo zenzelwe ukunika ulawulo oluchanekileyo lwemozulu ngaphakathi kwiziko, nokuba imozulu ngaphandle kwesakhiwo igqithise okanye itshintsha. Iimeko zemozulu zilawulwa ngoluhlu lweemveliso zeSistim yokuPhumelela komoya kubandakanya ukungena komoya ...
Iinkukhu House Healthy Ventilation
Ukuhamba komoya okuchanekileyo ngundoqo kumhlambi weenkukhu osempilweni nonemveliso. Apha, sihlaziya amanyathelo asisiseko okufumana umoya omtsha kwiqondo lokushisa elifanelekileyo. Ukungena komoya yenye yezona zinto zibalulekileyo kwintlalontle kunye nemveliso yebroiler. Inkqubo elungileyo ayiqinisekisi kuphela ukutshintshiselana komoya okwaneleyo ...
Ukubala ukungena komoya
Ukubala iimfuno zenkqubo yokungenisa umoya ukwenza utshintshiselwano lomoya olwaneleyo kunye nokuhlangabezana neenjongo zomgangatho kulula. Olona lwazi lubalulekileyo olunokumiselwa bubuninzi bobutyebi bomhlambi (okanye ubunzima obuphezulu bomhlambi) obuya kwenzeka ngexesha lesityalo ngasinye...
inkqubo yokondla indlu yeenkukhu, Iinkukhu zokutyisa inkqubo, umphakeli wehagu, Greenhouse Cooling Pad, I-Evaporative Cooling Pad, inkukhu feeder,